Imicimbi ye-Fathom '' I-Fest Fest ': Amaviki ayisishiyagalombili Owesaba Nokuzijabulisa Esikrinini Esikhulu Lokhu Kuwa!
Ikhaya Izinto Ezintsha Okufanele Uzenze Imicimbi ye-Fathom '' I-Fest Fest ': Amaviki ayisishiyagalombili Owesaba Nokuzijabulisa Esikrinini Esikhulu Lokhu Kuwa!
by Waylon Jordan September 14, 2021 301 ukubukwa
Sithanda umcimbi omuhle we-Halloween lapha eHorror.com. Lapho izikrini yonke indawo ziba bomvu nezilo zicathamela ngemuva kwawo wonke amakhona, sisengxenyeni yethu. Okudala, okusha, sikuthanda konke, futhi imicimbi ye-Fathom ayikaze isishiye phansi njengoba begubha uhlobo lwakudala ngokulubeka esikrinini esikhulu lapho kungokwaso.
Kulo nyaka, lokho kusho Ukwesaba okukhulu: amasonto ayisishiyagalombili wobuhle obungapheli uhlobo oluhle kuwo wonke umndeni kusukela ngoSepthemba 26! Ukusuka ezindabeni zakudala kuya ekugqwayizeni kwe-Studio Ghibli, bathola okuthile kwawo wonke umuntu!
Bheka uhlu olugcwele ngezansi! Amathikithi we Ukwesaba okukhulu ukuhlolwa kungathengwa ngu UKUFAKA LAPHA!
Imicimbi yeFathom Ukwesaba okukhulu Ikhalenda!
Carrie Isikhumbuzo se-45th: NgeSonto, Septhemba 26 nangoLwesithathu, Septhemba 29
Kususelwa kokuthengiswa kakhulu Stephen King inoveli, uCarrie (USisi Spacek) ungumuntu onesizungu esikoleni esiphakeme futhi akazethembi, akanabo abangane… futhi akazi nakancane ngobungako bamandla akhe ayimfihlo etelekinesis. Kepha lapho umama wakhe ophatheka kabi kwengqondo nabafunda naye abanonya ekugcineni beqisa kakhulu, osemusha owake waba namahloni uba yindlu enamandla engalawuleki, efuna impindiselo ebangela ukuthi sonke isihogo siqhume ngokuhlanya kwegazi, umlilo nesibabule! UPiper Laurie, John Travolta, no-Amy Irving ziyesabeka kule classic eshaqisayo. Thenga amathikithi lapha.
UDracula, uFrankenstein Isici Esiphindiwe: NgoMgqibelo, Okthoba 2
Sekuyiminyaka engama-90 kwa-Universal Dracula futhi Frankenstein okokuqala kwenziwe umusa esikrinini kanti iFathom Events ibuyisa izikhulu zawo wonke ama-movie we-monster esikrinini esikhulu ngesici esikhethekile esiphindwe kabili. Abalandeli bazophinde bavakashele i-Universal Backlot endala njengengxenye yokuhlolwa. UBela Lugosi noBoris Karloff bayajabula futhi baphola njengabanye futhi silapha umzuzu nomzuzu walo. Thenga amathikithi lapha.
KaStuido Ghibli Kuphelelwe umoya Umgubho wama-20: NgeSonto, ngo-Okthoba 3 (Kubanjwe), ngoMsombuluko, Okthoba 4 (Subbed), nangoLwesithathu, Okthoba 6 (Kubanjwe)
Umndeni kaChihiro uthuthela endlini entsha, kepha lapho bema endleleni yokuhlola isigodi esishiyiwe, abazali bakhe benza uguquko oluyindida futhi uChihiro ushintshelwa ezweni lemimoya emnandi ebuswa umthakathi uYubaba. Beka ukusebenza endlini yokugeza yemilingo yemimoya namademoni, uChihiro kumele asebenzise bonke ubuhlakani bakhe ukuze aphile kule ndawo entsha engajwayelekile, athole indlela yokukhulula abazali bakhe futhi abuyele ezweni elijwayelekile. Echichima ngezidalwa eziqanjiwe kanye nokuxoxwa kwezindaba okujabulisayo, iSpirited Away yaba yisihlabani somhlaba wonke, futhi ingenye yamafilimu ahlonishwa kakhulu kunabo bonke. UHayao Miyazaki uzuze umklomelo we-Academy ngale filimu enhle egqwayizayo! Thenga amathikithi lapha.
Abafileyo Ababi Isikhumbuzo seminyaka engama-40 ngesingeniso esikhethekile sikaBruce Campbell: NgoLwesine, Okthoba 7
Umlotha (UBruce Campbell), intombi yakhe uLinda (Ukubheja uBetsy), udadewabo uCheryl (U-Ellen Sandweiss), nombhangqwana uScotty (UHal Delrich), noShelly (USarah York), shayela ekamelweni elikude ehlathini ukuze ubaleke kumnandi. Ngenkathi belapho, bathola iNecronomicon Ex-Mortis (aka “The Book of the Dead”), itomu lasendulo elinombhalo ovusa abafileyo lapho lifundwa ngokuzwakalayo. Ngemuva kokukhulula ububi bengahlosile, laba bangane abahlanu kumele balwele izimpilo zabo noma bathathwe yimimoya. Thenga amathikithi lapha.
Scream Isikhumbuzo se-25: NgeSonto, ngo-Okthoba 10 kanye noMsombuluko, Okthoba 11
Ngemuva kochungechunge lokufa okungaqondakali kwehlela idolobha labo elincane, iqembu labangane elaliholwa nguSidney Prescott (UNeve Campbell) iba yisisulu sombulali ofihliwe. Njengoba isibalo somzimba sikhuphuka, uSidney nabangane bakhe baphendukela “emithethweni” yamafilimu asabekayo ukuze basize ekulweni nokwesaba kwangempela abahlala kulo. Ifilimu nayo ilingisa Courteney Cox, UDavid Arquette, Skeet Ulrich, UMathewu Lillard, UJamie Kennedy, Rose McGowan, Futhi Drew Barrymore.
Abalandeli abazohambela lo mcimbi okhethekile bazophinde babhekelwe ukubheka ngemuva-kwe-ifilimu okuqukethe izingxoxo zokuvuna nabo Wes Craven, UKevin Williamson, UNeve Campbell, Courteney Cox, futhi nokuningi. Thenga amathikithi lapha.
I-TCM Big Screen Classics Yethula Ukuthula kwamaWundlu Isikhumbuzo se-30: NgeSonto, ngo-Okthoba 17 kanye nangoLwesithathu, Okthoba 20
Lapho i-psychopath egama linguBuffalo Bill ibulala abesifazane futhi ikholelwa ukuthi kuthatha umuntu ukuthi azi eyodwa, i-FBI ithumela i-Agent Clarice Starling (Jodie Foster) ukuxoxisana nesiboshwa esilahliwe: UDkt Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), udokotela wezifo zengqondo odla umuntu othakazelisa i-ejenti yakhe encane njengalokhu elambele ukubulala. Njengoba ubudlelwane babo bukhula, uStarling uphoqeleka ukuthi abhekane hhayi namademoni akhe kuphela, kepha futhi nobubi obunamandla amakhulu angaba nesibindi sokumisa! Thenga amathikithi lapha.
Isitudiyo sikaGhibli I-Howl's Moving castle: NgeSonto, Okthoba 24 (ubiziwe), ngoMsombuluko, Okthoba 25 (subbed), nangoLwesine, Okthoba 28 (ubiziwe)
USophie, intombazane ethule esebenza esitolo sezigqoko, uthola impilo yakhe iphazamisekile lapho esuswa ngokoqobo ezinyaweni zakhe yindoda enhle kodwa engaqondakali okuthiwa uHowl. Umthakathi oyize noziphindiselayo Wokungcola, onomona ngobungani babo, ubeka isiqalekiso kuSophie futhi amenze owesifazane oneminyaka engama-90 ubudala. Emzamweni wokuqeda lesi sipelingi, uSophie ukhuphukela enqabeni ebabazekayo kaHowl angene empilweni entsha yokumangala nokuzijabulisa. Kepha njengoba kwembulwa amandla weqiniso wobuthakathi bukaHowl, uSophie uzithola elwa ukuze abavikele bobabili empini eyingozi yobuthakathi esongela umhlaba wabo. Kufaka amakhono wezwi we ULauren Bacall, Christian Bale, UBilly crystal, IBlythe Danner, Emily Mortimer, Futhi UJean Simmons. Thenga amathikithi lapha.
RiffTrax Bukhoma I-Amityville 4: Ukuphunyuka Okubi: NgoLwesibili, Okthoba 26
Kusenobubi laphaya phezulu endlini endala yase-Amityville. Iqembu labapristi liyahlangana ukucima idimoni osekuyisikhathi eside likhathaze lo mbhede omuhle onemibhede emihlanu, ogeza abane baseDashi ogcwele intelezi yezwe lakudala kanye nesikhalazo esiningi somgwaqo. KODWA - ububi buyaphunyuka! Okufanele ngabe kwenziwa kwacaca ngesihloko se-movie. Futhi iphunyuka kanjani? Njengakho konke okubi okwenziwayo: ngokuba nesibani esisezingeni eliphansi, ukuthengiswa lapho kuthengiswa khona igaraji bese kuthunyelwa eLos Angeles, lapho imihlobiso eminingi yasendlini emibi ekugcineni ithola ikhaya.
Ngokushesha isibani samademoni siqala ukubusa okwesabisayo ekhaya lomndeni ongenacala, ukubulala izilwane ezifuywayo kanye nabalungisi basekhaya, ukuphoqa izingane ukuthi zisebenzise amathuluzi kagesi ngezindlela ezingaphephile, nokuthola umphefumulo kadadewabo omncane uJessica, oqala ukwenza izinto ngokushesha ijezi eliphelele.
Kukumfundisi omncane uBaba Kibbler ukuthi asindise umndeni futhi abhekane nesibani esibi, ubuso nobuso, ngaphambi kokuba kufe abantu abaningi. Kulungile, abantu abaningi bayafa, kepha ingabe ubaba uBibbler angagcina eyiqedile? Joyina UMthethosivivinywa (Corbett), UMike (uNelson), Futhi UKevin (Murphy) kumatiyetha ezweni lonke ngenjabulo enhle ye-Halloween — ubusuku neRifftrax Live ne-Amityville 4: The Evil Escapes! Thenga amathikithi lapha.
Ucingo (I-Uncut Experience): NgoLwesithathu, Okthoba 27
Kusuka kumdali we Indawo Yokugcina, U-Lin Shaye futhi UTobin Bell inkanyezi kule ndaba esabekayo yokufa kusukela ekwindla ka-1987. Ngemuva kwengozi edabukisayo, iqembu labangane basemadolobheni amancane kumele lisinde ebusuku emzini wabashadikazi ababi. Ngamunye ngamunye, amaphupho abo amabi kakhulu asheshe abe ngokoqobo njengoba bengena embusweni we Ucingo. Abangani Abane. Ucingo olulodwa. Amasekhondi angama-60. Hlala Uphila.
Le-Uncut Experience ifaka izigcawu ezisusiwe kanye nengxoxo nomqondisi olandela ifilimu. Thenga amathikithi lapha.
Indoda Engabonakali, Indoda Yempisi Isici Esiphindiwe: NgoMgqibelo, Okthoba 30
Baqhubeka nokugubha kwabo ifa lezilo zakudala ze-Universal, Imicimbi yeFathom Ukwesaba okukhulu kufaka phakathi amafilimu amabili agxilisa umgogodla ngosuku olulodwa. Yini eyenza isilo futhi yini eyenza indoda? Izimpendulo zingahle zilele Indoda Engabonakali futhi Indoda Yempisi. Kokubili lokhu kudlalwa ngokukhazimulayo nemiphumela emihle ekhethekile engazange ifaniswe nosuku lwabo. Thenga amathikithi lapha.
I-ParaNorman: NgoLwesibili, Novemba 16
Kulesi sikhangiso samahlaya esivela ku-LAIKA, idolobha elincane livinjezelwa amaZombi. Idolobha lingashayela bani? Kuphela ngumfana wendawo oqondwe kabi uNorman, okwazi ukukhuluma nabafileyo. Ngaphezu kwamaZombi, kuzofanele athathe izipoki, abathakathi futhi, okubi kunakho konke, abantu abadala, ukuze asindise idolobha lakhe esiqalekisweni esadlula amakhulu eminyaka. Kepha lo mhlebi osemncane we-ghoul ngesibindi ubiza konke okwenza iqhawe - isibindi nobubele - njengoba ethola imisebenzi yakhe yobungqingili icindezelwa emikhawulweni yabo yezinye izizwe. I-Voice Cast: Kodi Smit-McPhee, UTucker Albrizzi, Anna Kendrick, Casey Affleck, UChristopher Mintz-Plasse, ULeslie Mann, uJeff Garlin, U-Elaine Stritch, UBernard Hill, UJodelle Ferland, Isiphepho iBledsoe, U-Alex Borstein, Futhi John Goodman. Ikhiqizwe ngu U-Arianne Sutner futhi UTravis Knight. Ibhalwe ngu UChris Butler. Kuqondiswe ngu USam Fell futhi UChris Butler. Thenga amathikithi lapha.